အလှူခံဆိုပြီး အလှူတာဟုတ်ပါစေ (ဆူး) သို့| Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » အလှူခံဆိုပြီး အလှူတာဟုတ်ပါစေ (ဆူး) သို့ 
အလှူခံဆိုပြီး အလှူတာဟုတ်ပါစေ (ဆူး) သို့ 
Posted by phone_kyaw on Mar 24, 2012 in Copy/Paste | 49 comments
အသံတွေကြားလို့ ပါ။ အခမဲ့ဆိုပြီး နောက်ကွယ်မှာ ပိုက်ဆံကောက်တယ်ကြားတယ်။ ဟုတ်လားဆိုတာ ဖြေပေးပါ…မမဆူးရေ….။
ဒီနေ့ ဆူးမရှိလို့ သူ့ကိုယ်စား ဖြေပေးလိုက်ပါမယ် …
ခရီးသွားမယ့် ကားနဲ့ စားစရိတ်အားလုံး အခမဲ့ဖြစ်ပါတယ် … ဘယ်သူ့ဆီကမှ အလှူခံမကောက်ပါဘူး .. မမ တစ်ယောက်ထဲရဲ့အလှူပါ … ဒါပေမယ့် အရမ်းရင်းနှီးတဲ့ရွာသူားတစ်ချို့က အချိုရည်ဖိုးပေးပါရစေ .. မုန့်ဖိုးပေးပါရစေ စသဖြင့် နောက်ကွယ်ကနေ လာလှူထားတာမျိုးတော့ ရှိပါတယ် …
ဟဲ့ ပလုပ်တုတ် ကိုဘော်ကျုံး …
စကားကြီးကဗျာ .. မရှင်းမရှင်း နဲ့..
အများနားလည်အောင် သေချာ ရေးပါဦး..
ကျုပ်ပဲ ဒုံးဝေးနေသလား.. ခင်ဗျားကပဲ ဂေါက်နေသလား…
နေတာကတော့ သြစီမှာ …
ရန်ကုန်ကိုများ.. နေ့ချင်းပြန်ပြီးသတင်းထောက်လုပ်စားနေသလားမှတ်ရတယ် …. ။
(ဘလိုင်းကြီး ကျုပ်ကို မဆဲနဲ့နော် … မရေးလျှင် မနေနိုင်တကာလွဲလို့ပါ ဟိဟိ )
ဝုတ်ဒယ် အဲ့လူဂျီးက အတဲကောင်းဒယ်
တူဂအရက်တောက်ဘူး လေးပေါက်နွားမဂျီးရဲ့ နို့ပဲချို့ဒါလေ .. တိဝူးရား ;)
အယ် ကဘုန်းကျော်တော့ လုပ်ချလိုက်ပန်ပီ…….
ရှင့်မလည်းဒုက်ခပဲ သူများက အလှူအတွက် ပြင်လိုက်
ရှင်က အလှူကို ပွဲဆူအောင်လုပ်လိုက်
ဝါသနာ ဖျာကာမရ ဆိုတာမျိုးပဲထင်တယ်
သံသယတွေနဲ့ ကာဆီးကာဆီးလုပ်နေရင် ..ကိုယ့်အနေအထားကိုယ်စဉ်းစား
ခင်ဗျားက ဗုဒ္ဓဘာသာ မဟုတ်တာ သေချာ နေပြီ ။
ဖိုရမ်မှာ ကိုအောင်က ခရီးစဉ်အတွက် စိတ်ပူလို့ မေးမြန်းထားတာကို မမက ပြန်ဖြေထားတာလေး ကူးပေးလိုက်ပါတယ် ….
ကိုအောင်ရေ-အလှူကို ၀ိုင်းဝန်းပူပန်စဉ်းစားပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးအကြီးကြီး တင်ပါတယ်။ Smile Smile Smile
ဒီအလှူကို ဖြစ်မြောက်စေချင်တဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်က ကျေးရွာလူထု ကျန်းမာရေးအတွက် တတပ်တအား အားကိုးအားထားပြုနိုင်မယ့် အခမဲ့ ကုသပေးမယ့် ဆေးရုံကို အောင်မြင်စေချင်တာဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်တစ်ယောက်တည်းအားထက် စုပေါင်းအားနဲ့ဆိုရင် ပိုမိုအောင်မြင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
နောက်ပြီး ရွာထဲကမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေ စုပြီး လှူဖြစ်စေချင်တာလည်း ပါပါတယ်။
နောက်ဆုံးကတော့ ကိုယ့်မြို့ကိုယ့်ရွာကို အလည်ခေါ်တဲ့ သဘောပါပဲ။
စုပေါင်းခရီးသွားခြင်းဖြင့် ရွာသူားတွေ အချင်းချင်း ပိုမိုရင်းနှီး ခင်မင်သွားစေနိုင်မယ့်အပြင် ဒေသန္တရ ဗဟုသုလည်း ရနိုင်မယ်။
အားလုံးကို အဆင်ပြေပြေ ပျော်ပျော်ပါးပါး ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။
ကိုယ့်မြို့ကိုယ့်ရွာကို အလည်ခေါ်တာလည်း ဖြစ်တာမို့ ကိုယ်ကပဲ ကျခံဖို့ စဉ်းစားထားတာပါ။
အဓိက ဦးဆောင်နေတဲ့ ဆူးက တာဝန်ပိမှာကို စိုးရိမ်ပြီး အစစ လိုက်စဉ်းစားစီစဉ်ပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အားလုံးပဲ စိတ်အနှောင့်အယှက် မဖြစ်ပါပဲ
လိုက်ပါကြဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ SmileSmileSmile
“အသံတွေကြားလို့ ပါ။ အခမဲ့ဆိုပြီး နောက်ကွယ်မှာ ပိုက်ဆံကောက်တယ်ကြားတယ်”
လို့ ခင်ဗျား ပြောချင်တာက ဆေးရုံ မှာ လူနာတွေကို ပြောတာလား။ ရှင်းအောင်လို့ပါ ။
ဒီအလှူက တကယ်ဖြစ်သင့်တဲ့ အလှူပါ
မတိုင်ခင်ကတည်းက ဆရာမဆူးက ပန်းတနော်..လမ်းကောင်းလားမေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး
ဆရာမဆူးရဲ့ စိတ်ကူးကိုလေးစားပါတယ်။တကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာကို တကယ်လှူတာပါ
နောက်မမတို့ ကိုနေချားတို့ မြို့ဖြစ်ပါတယ် သူတို့ ဘာသာလှူရင်တောင်ရပါတယ်
ကဲကိုဖုန်းကျော် ပထမအလှူတုန်းကလည်း ခင်ဗျား ဖွလိုက်သေးတယ်။
ရွာသားရွာသူတွေ ပူးပေါင်းပြီး လူမူဝန်းကျင်လှပအောင်လုပ်တာ ကျွန်တော်တော့
ကြိုဆို အားပေးတယ်။ခင်ဗျားကို တိုင်းပြည်အကျိုးဆောင်ခဲ့တယ်ဘာညာကြားဖူးတယ်
အင်း ဆူးရေ တရားနဲ့ သတိမှတ်ပါ အကောင်းလုပ်ရင် အဖျက်ကတော့ ရှိစမြဲပဲ
ဒါကို ဥပေက္ခာပြုပါကွယ်။အကိုကြီးတို့ဆို ဒါထက်မကခံရတာပါ။ဖြေရှင်းနေရင် အချိန်ကုန်ပါတယ်။
ကျွန်တ်ာတော့ ပန်းတနော်ဆေးရုံးကိုလှူမယ်ဆိုတာ ၀မ်းသာလိုက်တာဗျာ။
ကျနော် ဂေဇက်ကိုစွဲစွဲမြဲမြဲဖတ်ဖြစ်နေတာ (အမှန်အတိုင်းပြောရလျင်)ကွန်မန့်တွေကြောင့်လည်း အများကြီးပါပါတယ်။ တစ်ခါတစ်သိပ်ပျင်းလာလျင် ကွန်မန့်တွေချည်းပဲ လိုက်ဖတ်ပစ်လိုက်တယ်။
ကိုဘုန်းကျော်လည်း သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကွန်မန့်တွေဖတ်ရတာ သဘောကျပုံရပါတယ်။
ပြီးတော့ တစ်ခါတစ်ခါ ကွန့်မန့်ထဲမှာ စရိုက်လေးတွေလည်းတွေ့ရတတ်တော့ ရွာသူားတွေရဲ့စရိုက်တွေကိုလည်း သိချင်ပုံရပါတယ်။ တစ်ချို့ သူတစ်ပါးကိုစိတ်တိုအောင်စ သူတစ်ပါးစိတ်ဆိုးတာကြည့်ပြီး သဘောကျနေတတ်တဲ့စရိုက်တွေလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။
ဘာပဲပြောပြော အလှူကိစ္စက ဆူဆူ ဆူဆူနဲ့ပြန်စည်လာတာတော့ အမှန်ပဲ။
ဖက်နော် ဖက် ကိုပြောတာ
မင့်မလဲ အကုသိုယ်တယ်ကြီးပဲ သူများအလှူတောင် စာရင်းစစ်လုပ်ချင်နေသေးတယ်
ဒီနေ့ တစ်နေကုန် လိုင်းအောက်နေလို့ ရွာထဲ ၀င်မရဘူး။
ရတော့လည်း ကိုဘုန်းကျော်ရဲ့စာကို ဖတ်ပြီး တော်တော်စိတ်မကောင်း ဖြစ်သွားတယ်။
ဒီလောက်စာလေးနဲ့ ပိုစ့်တင်တာကိုက သဂျီးကို အရင်ဆုံးအားနာဖို့ ကောင်းနေပြီ။
(ကွန်မန့်နဲ့ မေးလည်း ရပါတယ်။)
ဆူးက ဒီနေ့ ခရီးသွားမယ်လို့ ပိုစ့်မှာရော၊ ဖိုရမ်မှာပါ တင်ထားပါလျှက်နဲ့
ဒီနေ့မှ ဆူးကို နာမည်တပ်ပြီး ….
တိုက်ဆိုင်မှုလား၊ တမင်ကြံစည်မှုလားတော့ မသိဘူး။
ဆူးကို တိုက်ခိုက်ချင်စိတ်ရှိရင်လည်း တိုက်ခိုက်သင့်တဲ့ အချိန်မျိုးကို စောင့်ပါ။
အခုကိစ္စမှာ အလှူကို စပြီး စဉ်းစားကတည်းက ….
ကျမက ကျခံဖို့ ကြိုတင်စီစဉ်ထားပေမယ့် ခင်မင်ရင်းနှီးကြသော မိတ်ဆွေများက စေတနာနဲ့ ၀ိုင်းဝန်းဖေးမလိုကြတဲ့အတွက် လက်ခံထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ခရီးစရိတ်အတွက် ရေအတွက် အအေးအတွက် လှူတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်း အားလုံးကို အသိပေးထားပါတယ်။
အလှူပြီးရင် အလှူနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စာရင်းရှင်းတမ်းကို ထုတ်ပြန်ပေးမယ်လို့လည်း ပြောထားပါတယ်။
ကိုဘုန်းကျော်အနေနဲ့ ကူညီပြီး စာရင်းကိုင်ပေးမယ်ဆိုရင်၊ စာရင်းစစ်မယ်ဆိုရင်လည်း ကြိုဆိုပါတယ်။
အလှူနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကိစ္စအားလုံး ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိချင်တာ မှန်သမျှ မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။
ကိုဘုန်းကျော်ရေ မျက်မှန်စိမ်းကြီး ဖြုတ်ကြည့်လိုက်ပါဦး။
စိတ်မကောင်းပါဘူး ကိုဘုန်းကျော်။ ကိစ္စအားလုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိအောင် ပိုစ့်တွေရော၊ ကွန်မန့်တွေရော စေ့စေ့စပ်စပ် ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦး။
လူဆိုတာ ကိုယ့်သမိုင်း ကိုယ်ရေးနေတာမို့ ကိုဘုန်းကျော်သမိုင်း မရိုင်းစေချင်ပါဘူး။
စာနှစ်ကြောင်းနဲ့ရေးတင်တဲ့သူ ဆြာဂီးဘုန်းကျော်ကတော့ ကွန်မန့်တွေ
ကို ဘီယာလေးနဲ့ အမြည်းလုပ်နေမှာ သေချာတယ်။
အေးဗျာ . . တော်တော်ကောင်းတဲ့ အမြည်းဗျနော ၊
ခံလို့လဲ ကောင်းမယ် ထင်တယ် ။
ညီဘုန်းကျော်ရေ သင်သည် တစ်ဆုပ်၊တစ်လုတ်သော အဟာရနှင့်၊တမုတ်၊တခွက်သော ရေကို သူတပါးအား ပေးကျွေးဘူးပါက အပေါ်က အကြောင်းအရာအား ရေးစရာ အကြောင်းကို မရှိပါ။
ရွာထဲမှာ နောက်ကနေ “တဟဲ့ ဟဲ့” အော်ပြီး လိုက်ထိန်းရမဲ့ မောင်လေး တစ်ယောက် ကောက်ရပြီလို့ သဘောထားလိုက်ပါပြီ။
ပထမဆုံး သူကြီး ကို တုတ်နဲ့ ထိုး တဲ့ စကားလုံး တွေဖြစ်တဲ့ ရှေးဘဝ၊ အခုဘဝ၊ နောက်ဘဝ ဆိုတာတွေ သုံးပြီးပြောကြည့်ချင်ပါတယ်။
ဒီလောက် ကျယ်ဝန်း တဲ့ လောကကြီး ထဲမှာ မြင်တောင်မမြင်ဘူးတဲ့ လူတွေအချင်းချင်း ခင်သွားကြဖို့ ဆိုတာ အတော်လေးခက်ပါတယ်။
“ဒါကတော့ အင်တာနက်ထဲ စကားတွေပြောရင်း စိတ်ချင်းတူ လို့ခင်သွားကြတာ မဆန်းဘူး” လို့လဲ ဒီနေရာမှာ ပြောနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အင်တာနက်ထဲမှာ ဒီလို စကားပြောလို့ ရတဲ့ social group website တွေ အများကြီး မှာမှ ကျွန်မတို့ ဘာလို့ ဒီဂေဇက် ကို ရွေးပြီးအဖွဲ့ဝင်ခဲ့ပါလိမ့် ဆိုတာရယ်၊
ဒီရွာက လူတွေထဲက လူအားလုံး မဟုတ်ပေမဲ့ တစ်ချို့ သူတွေဟာ တစ်ယောက် ကို တစ်ယောက် မြင်လဲမမြင်ဘူး ဘဲနဲ့ သိလဲမသိဘူးဘဲနဲ့ ချမ်းသာ ဆင်းရဲ ဂုဏ်ရှိ မရှိ မသိကြပါဘဲ နဲ့ ဘာလို့ သံယောဇဉ် ဖြစ်ခဲ့တယ်လဲ ဆိုတာရယ်။
အဲဒီအထဲ မှာ ဒီလို အလှူဒါန မျိုးကို ဝိုင်းပြီး စိတ်တူညီစွာ လုပ်ကြတာလဲ ဆန်းပါတယ်။
ဒါဟာ တစ်ခုခု တိုက်ဆိုင်လို့ပါဘဲ။
ဒီတော့ ကျွန်မတို့ နောက်ဘဝရှိတယ် ဆိုတာ၊ ရှေ့ဘဝ ရှိတယ်ဆိုတာ ကို သက်သေမပြနိုင်လို့ မယုံသူရှိရင်လဲ မယုံလို့ ရပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အဲဒီလို တိုက်ဆိုင်မှု ဆိုတဲ့ အကြောင်း ဟာ အစကို ရှာရင် လက်ရှိဘဝ အခြေအနေမှာ ရှာဖို့ခက်နေပါတယ်။
ဒီတော့ ကျွန်မတို့ အားလုံး နောက်ဘဝ က တစ်ခုခု တူခဲ့တဲ့ အကြောင်း က ဒီမှာ အကျိုးဖြစ် လာတာလို့ ဘဲ ဆိုလိုက်ကြပါစို့။
အခုလို စုပေါင်းပြီး အလှူ လုပ်ကြတာကလဲ အဲဒီလို တူတဲ့ သူတွေ လုပ်ကြတာပါ။
“မပါမနေရ” ဆိုပြီး မောင်းထုတာမဟုတ်ဘဲ စိတ်တူရင်ပါလို့ ကြေညာ ပြီးသား မဟုတ်လား။
ဒီလို လှူခြင်း ဖြင့် နောင်ဘဝ မှာဒီလူတွေ ပြန် စုံမယ်၊ နောင်ဘဝ မှာ ကောင်းကျိုးတွေ ရမယ် လို့ တော့ အစ်မ တာဝန်မခံ နိုင်ပါဘူး။ ;-)
ဒါပေမဲ့ အဲဒီ အလှူ ကနေတစ်ဆင့် ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ ရလာဒ် ကတော့ ဆင်းရဲနွမ်းပါးပြီး မြို့ပြနဲ့ ဝေးတဲ့ နေရာမှာ ဆေးရုံ မရှိလို့ ရေတိမ်နစ် ရရှာတဲ့ သူတွေ နဲပါးသွား မှာကိုတော့ ကျွန်မတို့ ရဲ့ လက်ရှိဘဝ မှာ မြင်နိုင်ပါမယ်။
အဲဒီ ပီတိ ကို လက်ရှိ ဘဝ မှာ စားသုံးနိုင်ပါမယ်၊
မြန်မာပြည် က အဲဒီလို ကျေးလက်နယ်တွေက လူတွေဟာ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ တွေမှာ တကယ်ဘဲ ပိုပြီးသနားစရာကောင်းပါတယ်။
ဒီတော့ ကိုဘုန်းကျော် ကို လဲ အစ်မ တစ်ယောက် ရဲ့ တာဝန် ရှိသည်နှင့်အညီ အဲဒီ ဝမ်းသာပီတိ ကို ရနိုင်ဖို့ နည်းသည် များသည် ငွေပမာဏ ဂရုမထား ဘဲ စိတ်စေတနာ အပြတ် ပါဝင်လှူဒါန်းဖို့ကို တိုက်တွန်းပါ တယ်။
“အခမဲ့ဆိုပြီး နောက်ကွယ်မှာ ပိုက်ဆံကောက်တယ်ကြားတယ်။” ဆိုတာကိုလဲ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သဘောပေါက်ပြီ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဒီတော့ စိတ်တူတယ် ထင်ရင် တစ်ခြား သံသယ စိတ်တွေ ကို ဘေးဖယ်လိုက်ပြီး ပူးပေါင်းပါ ကိုဘုန်းကျော်ရေ။ :-)
.. လှူငွေတွေအားလုံး လှူတဲ့နေရာအကုန်ရောက်ရမယ်.. ဆိုတာ.. မြန်မာတွေအသိမှား( အယူမှား)နေတဲ့ ကိစ္စတခုလို့မြင်မိတယ်..
ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေမှာ.. အလှူအကုန်က… အထွေထွေစားရိပ်..နှုတ်ပြီးမှ လုပ်ကြရတယ်..
ကယ်လီဖိုးနီးယားဆိုရင်(မှတ်မိသလောက်)တနှစ် ဒေါ်လာ၁သိန်းနဲ့အထက် ၀င်ငွေ(လှူငွေ) ရှိရင်.. အဲဒီ NGO အဖွဲ့အစည်းထဲ အလုပ်ပေးနေသူက လစာ ယူလို့ရတယ်..။
ကမ္ဘာအကြီးဆုံး လှူတန်းပေးဝေနေတဲ့..အဖွဲ့အစည်းကြီးတွေအကုန်(အကုန်) ..(ကုလသမဂ္ဂအပါအ၀င်).. အထွေထွေစားရိပ်နှုတ်ပြီးမှ.. ကျန်တဲ့ငွေကို.. လှူဖို့ပေးဖို့စဉ်းစားကြတာပါ…။
သာမန်အားဖြင့်.. စားရိပ်အထွေထွေက.. ၀င်ငွေ(အလှူရငွေ) အားလုံးရဲ့.. ၅၀ရာခိုင်နှုန်းအထက်မှာရှိကြပါတယ်..။ တချို့.. ၇၅-၈၀လောက်အထိရှိတယ်..။
သူကြီးလုပ်တာနဲ့ ဘုရားတွေက ကန်ထရိုက်အလှူတွေတောင် သတိရသွားတယ် …
အလှူလုပ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ခြင်းကွာတော့ လုပ်ဆောင်ချက်ခြင်းလဲကွာတာပေါ့နော် …
သူကြီးရေ … ဒီက အလှူလုပ်တဲ့ လူတွေက “အလှူခံစား” (အလှူခံ ပေးပြီး % စား) တဲ့လူတွေ မဟုတ်ကြပါဘူးဗျာ။ ဒီ့ထက် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရရင် .. တမင် ကို အချိန်ကုန် ငွေကုန် ခံပြီး စုပေါင်း အလှူဖြစ်ဖို့ အားထုတ်ကြတာပါ။ လှူချင်တယ် ဆိုရင် သွားရောက်ကောက်ခံ ပေးပါတယ်။
လှူတဲ့ သူရဲ့ ချွေးနှဲစာ ကို .. လှူရမယ့် နေရာကို 100% အရောက်ပို့ ပေးချင်တာပါပဲ။ သူကြီး ရဲ့စေတနာ ကိုလဲမြင်ပါတယ် …. ဒီ့ထက် ကောင်းမယ့် နည်းလမ်း လေးရှိရင် ပြောပါဦးနော့ .. ဒီနည်းလမ်းကိုတော့ မကြိုက်ဘူး။ အဲလို သာဆို .. ရွှေတိဂုံ ဘုရားသွားပြီး အုန်းငှက်ပျော၊ ဖယောင်းတိုင်၊အလှူခံပုံး ပဲ ကန်ထ၇ိုက် ဆွဲလိုက်တော့မယ်။
အပွင့်လင်းဆုံးပြောရရင် ကိုယ်အလုပ်ကိုပစ်ထားပြီး ဒီနောက်ကိုလဲ မလိုက်နိုင်တာအသေအချာ။
အဲတော့ ဒီလှူတဲ့အထဲက ငွေ မယူဘူးဗျာ။
ဘယ်သူလုပ်မလဲ? ဘယ်သူဦးဆောင်လုပ်မလဲ.. ?
ဦးဆောင်သူဟာ.. ဘယ်နှကြိမ်.. ၂ပြန်၃ပြန်.. အိပ်ထဲက၂ခါ-၃ခါစိုက်.. လုပ်ပေးနိုင်မလဲ ?
မြန်မာပြည်မှာ.. ငရဲနဲ့ခြောက်..ဘုံနဲ့မြှောက်တဲ့..အလှူကလွဲပြီး.. တခြားလူမှုရေးအလှူအတန်းတွေ.. ဦးဆောင်လုပ်မဲ့သူတွေ.. လျှော့နည်းနေတာ.. ဒါကြောင့်ပါပဲ..
တိုးတက်ဖြစ်တည်မှုကို ဟန့်တားရာမှာ.. အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့.. အတားအဆီးတခုပါ..။
၁၀၀% အလှူငွေဟာ.. လက်ခံတဲ့နေရာဆီရောက်ရမယ်ဆိုတဲ့.. ဒီအတွေးအခေါ်ကို ကမ္ဘာတန်းအနေနဲ့လက်မခံပါဘူး.. လက်တွေ့လည်းမကျပါဘူး..။
တကယ်တော့.. အလှူတိုင်း(အလှူတိုင်း)မှာ.. (ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေရဲ့)အစိုးရကနေ.. အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်အပါအ၀င်.. တခြားထူးခြားတဲ့ မက်လုံးတွေအများကြီးလုပ်ပေးထားတယ်..။
ဒီလိုနဲ့.. ဦးဆောင်သူရှိပြီးစိတ်ပါသူတွေဖွဲ့ထားတဲ့.. အဖွဲ့အစည်းလေးတွေဟာ.. ပရိုအဆင့်အတန်း.. အလှူလုပ်..လူသားတွေကို… အကူအညီပေးတဲ့.. Organization ကြီးတွေဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်…။
အဲဒီအပေါ်ကလင့်ခ်မှာ.. အလှူလုပ်တဲ့.. ပရိုဂရမ်ဆီချပေးတဲ့.. ငွေကို..ရတဲ့အလှူငွေနဲ့အချိုးချတာ.. တွက်ပြထားကြတယ်..။
သူတို့က..စာရင်းမှာ.. 10% – 25% အထိတော့ သုံးကြတယ်..။
မြန်မာပြည်ထဲဝင်လာတဲ့.. NGO တွေဘယ်လိုလုပ်နေသလည်း.. သိချင်ရင်.. လိုက်လေ့လာကြည့်ဖို့ပါ..။
ကျုပ်ကတော့.. ရှေ့နေကိုလည်း စကားစပ်ပြီးမေးဖူးတယ်..။
သူကြီး ပြောတာကိုလက်သင့်ခံပါတယ်။ ကျွန်တော့ သဘောထား တစ်ခု ထဲအနေနဲ့ ဆိုရင် လဲ ထောက်ခံပါတယ်။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် .. အပြောမခံ ချင်တာပါ။ ခုလို အလွန် တိတိကျကျ လုပ်နေတာ တောင် … ဘယ်လို ပိုစ့်တင် ပြီးဘယ်လို အပြောခံ ရတယ်ဆိုတာ သူကြီးလဲ အသိပါ။ Etone,ဆူး,Mama နဲ့ ရွာသူရွာသား အားလုံး နီးပါး က … ကိုယ့် အလုပ် နဲ့ ကို အခြေကျ ပြီးသားတွေမို့ .. အဲလို လဲ လခ ယူပြီး .. လုပ်နိုင်ဖို့ ဆိုတာ မလွယ်ပါဘူးလေ။ အဲ့ဒီတော့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရရင် ..တစ်ခါ လုပ်ပြီး နောက်မလုပ် ချင်တော့ တာ က .. ပိုက်ဆံ စိုက် ရလို့ တစ်ခု ထည်းကြောင့်တော့ မဟုတ်ဘူး .. သူကြီးရေ …….” စေတနာ ကို တိုင် မှတ်ပြီး သေးနဲ့ ပန်း ခံရ လို့ … လို့ ထင်တာပါပဲ ” ဒါကတော့ ကျွန်တော့ စိတ်ထင်ပါ။
သဂျီး ရဲ့ စေတနာနှင့် လမ်းညွန်ချက် အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
စီးပွားရှာခြင်းနှင့် အလှူလုပ်ခြင်းသည် လုံးဝ ဆန့်ကျင်ဘက် ဖြစ်ပါသည်။
စီးပွားရှာခြင်းသည် မိမိ အိတ်ထဲသို့ ပိုက်ဆံ ရအောင် လုပ်ခြင်းဖြစ်ပြီး အလှူလုပ်ခြင်းသည် မိမိတ် အိတ်ထဲမှ စွန့်လှူခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။
ပေးခြင်း နှင့် ယူခြင်း ကို လွန်မဆွဲချင်သလို ကြားနေကဲ့သို့ ဟိုမရောက် ဒီမရောက် မလုပ်ပါဘူး။
ပေးတဲ့ ကိစ္စမှာ ပြတ်ပြတ်သားသား ပေးစွန့်ပါမည်။
စီးပွားအတွက်တော့ ယခု လုပ်တဲ့ အလုပ်ကိုသာ မက်မက်မောမော နှင့်သာ ပိုက်ဆံ ရှာချင်ပါသည်။
စေတနာသည် ကံ ဖြစ်သောကြောင့် ကံကောင်းအောင် စေတနာကောင်းကောင်း ထားပါမည်။
သဂျီးမင်း လည်း မမှားဝူး…
အော်ဝီနိဒ် အစ်စ် ဂျပ်စ် အ လစ်တဲလ် မားကတ္တင်း..
Long live da Marketing
ရွာမှာဆိုရင်…..ရှေ့ကလည်းမသွား နောက်ကလည်းမလိုက် ဘေးတိုက်ဆွဲတက်တဲ့အကျင့်ရှိတဲ့နွားဆို နွား သတ်ရုံကို ပို့ပြစ်ကျတယ်….။ဆိုတော့…က…။
မြန်မာပြည် ကမ္ဘာမှီဘို့ဆိုတာ အများကြီးလိုပါသေးတယ်။
အဲတော့ တတ်သလောက်လေးလုပ်တာကို ကောင်းအောင်ဝိုင်းကူပေးဘို့စဉ်းစားပါ။
ဒီလိုအလှူအတန်းကနေ ဘုံးကြ တရားလွန်သုံးကြလို့ ပြဿနာတက်တာတွေက နေရာအနှံ့။
အဲတော့ ဒီတစ်ခါတော့ သူကြီးရဲ့ပေတံကြီးကို ခဏသိမ်းထားလိုက်။
ဒါပြီးသွားရင် အားလုံးသိနေတဲ့သူကြီးကနေပြီး “မန်းလေးဂေဇက်အလှူတော်အဖွဲ့”ဖွဲ့လိုက်။
ဘာမှ မတတ်တဲ့ ကျနော်တို့လိုလူတွေလုပ်တတ်သွားအောင်သူကြီးက
ဒါဆိုရင် မန်းလေးဂေဇက်ရွာက လူတွေက ကမ္ဘာနဲ့မှီအောင်လုပ်တတ်သွားပြီလို့လက်မထောင်နိုင်မှာပေါ့။
ကဲသူကြီးရေ ပါးစပ်ကမပြောဘဲ လက်တွေ့စလိုက်ဗျာ။
အဖွဲ့ဖွဲ့တာ ၀န်ထမ်းခန့်တာတွေ အစီအစဉ်တွေဆွဲလိုက်။.
သူကြီးသာ အဲလိုလုပ်ရင် ကျနော်တောင်သူကြီးရဲ့အမြဲတမ်းဝန်ထမ်းအဖြစ်လုပ်ဘို့စိတ်ပါလာမယ်ထင်တာဘဲ။
တစ်ခုတော့ရှိတယ် လခကတော့ စားလောက်တဲ့လခဖြစ်ရမယ်နော်။
မလောက်လို့ခိုးရပါတယ် ဆိုတဲ့လူစာရင်းထဲတော့ မပါချင်ဘူးဗျာ။
သများတို့ကတော့ ပြောစရာမရှိလို့ ဘေးကနေ လက်ခုပ်တီးအားပေးတော့မယ်
မနေ့ညကမှ ခရီးက ပြန်ရောက်လို့ အင်တာနက်မဖွင့်နိုင်တော့လို့ ပြန်ရောက်ရောက်ချင်း အလှူကိစ္စ ဘာထူးလဲ လက်တို့ပြီး သတင်းစုံစမ်းတဲ့ အခါ ဒီပိုစ်အကြောင်း တွင်တွင်ပြောကြလို့ သိချင်စိတ်ဖြစ်သွားမိပါတယ်။
သေချာ သိချင်ရင်တော့ ပြောပြနိုင်ပါတယ်။ ဒီအလှူကို ပထမ စစချင်း ဆန္ဒရှိသူသည် မမ ဖြစ်ပါသည်။
ဆူး နဲ့ မမ စကားပြောမိတဲ့ အခါ ယခု အလှူ ကိစ္စ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ အလှူခံပေးပြီး အလှူကို အကြောင်းပြုပြီး အားလုံး တပျော်တပါး ပျော်ပွဲစား ခရီးစဉ် အဖြစ် ဖန်တီးနိုင်အောင် အစီအစဉ် ရေးဆွဲခဲ့သည်။ မမ မှ နေ့လည် ထမင်းနှင့် သွားရေး လာရေး တာဝန်ယူပေးထားပါသည်။
ဆူး နှင့် မမ တို့ နှစ်ယောက်ကတော့ အလှူ အတွက် နေ့နေ့ ညည ဘာလိုမလဲ တွေးတွေးမိနေရင်းမှ အလှူ အတွက် စေတနာတွေ တဖြေးဖြေး ပိုလာခဲ့ကာ.. အိတ်စိုက် ဖို့ အတွက် အတွေးတွေ တဖြေးဖြေး များပြားစွာ စဉ်းစားထားသည်များလည်း ရှိပါသေးသည်။
၁. အလှူ အတွက် အလှူငွေကောက်ခံတယ်။
၂. အလှူ ထွက်ချိန် သည် မနက်စောစော ၆နာရီလောက် စုရပ်ကို ရောက်ရှိရမည် ဖြစ်မည် ဖြစ်တဲ့ အတွက် မနက်စာ စားခဲ့ဖို့ ပြောပေမဲ့ မစားရသေးသူများ ဗိုက်မဆာအောင် အစားအသောက် တခုခု ကျွေးဖို့ (အိတ်စိုက် ကျွေးဖို့ စဉ်းစားထား)
၃. နေ့လည်စာ ထမင်းစားချိန် ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ကျွေးပါမည်။ (အိတ်စိုက် ကျွေးဖို့ စဉ်းစားထား)
၄. ညနေ အပြန်နောက်ကျခဲ့လျှင် ထမင်းစားချိန် ရောက်ခဲ့သော် ခရီးလိုက်ပါသူများ ဗိုက်ဆာပြီး စိတ်မကြည်မလင် ဖြစ်မှာ ကြိုတွေးမိတဲ့ အတွက် ညစာ စားချိန် နီးကပ်သော် ညစာကျွေးဖို့ (အိတ်စိုက် ကျွေးဖို့ စဉ်းစားထား)
၅. အလှူသို့ ကားဖြင့် တူတူသွားကြမည် ဖြစ်ပြီး လိုက်ပါချင်သူများ ကားခ စရိတ် အတွက် စိတ်မညစ်စေရအောင် အခမဲ့ လိုက်နိုင်အောင် စီစဉ်ထားပါတယ်။
လိုက်ပါသူ လူဦးရေ များလာတဲ့ အတွက် ကားကြီး ဈေးစုံစမ်းတဲ့ အခါ အဲကွန်း လေအိတ်ကားကြီး ၁နေ့တာ အတွက် ၄၅ယောက်စီးကို ၇သိန်း မှ ၃သိန်းခွဲ အနည်းဆုံး ပြောနေကြပါတယ်။
အလှူ အတွက် သောက်ရေ မုန့် အအေးနှင့် စားစရိတ်အမျိုးမျိုး ကို အကုန်ကျခံပေးမည့် မမ အတွက် ၀န်မပိုရလေအောင် ဆူး ရဲ့ စိတ်ကူးတခု အနေနှင့် ကားကြီး ငှားတဲ့ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာအောင် စဉ်းစားထားတာ တခု ရှိပါတယ်။
ကားများဖြင့် လိုက်ပါကူညီပေးနိုင်သူများ ဆက်သွယ်ပါလို့ ရိုးရှင်းစွာ ရေးထားပါတယ်။
ကားဖြင့် လိုက်ပါ မောင်းနှင့်ဖို့ စေတနာ ရှိသူအဖို့
ကားမောင်းပြီး လူအပင်ပန်းမခံပါနှင့် ကားအပျက်လည်း မခံပါနှင့် ဆီဖိုးကျသင့်သလောက်သာ ခရီးစရိတ်လှူဖို့ အလှူခံထားပါတယ်။
အကယ်၍သာ ကားစရိတ် တယောက်ကို ၁သောင်းခွဲကျပါတယ် ၂သောင်းကျပါတယ် ဆိုပြီး ကောက်ခဲ့လျှင်လည်း လိုက်ပါသူများ ထည့်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆူး နှင့် မမ ၏ ကိုယ်ချင်းစာသော အတွေးဖြစ်ပါသည်။ သာမာန် လခစား ၀န်ထမ်းတယောက် အနေနှင့် အလှူကိုလှူဒါန်းခဲ့ပါသည် မိမိ ချွေးနင်းစာဖြင့် စားစရိတ် သောက်စရိတ်မှ ဖဲ့ကာ လှူဒါန်းခဲ့ပြီး အလှူ ကို လိုက်ပါချင်ခဲ့သော် ကားခ ဆိုတော့ အဆီးအတားသည် ထို လူပုဂ္ဂိုလ်တို့အား စောင့်ကြိုနေခဲ့သော် သူများတွေ တပျော်တပါး သွားနိုင်ပေမဲ့ ဒို့တော့ ကျန်ခဲ့တယ် ဆိုပြီး ၀မ်းနည်းကာ စိတမကောင်း မဖြစ်ရလေအောင်.. မည်သူကိုမှ ခရီးစရိတ် အတွက် စိတ်အနှောက်အယှက် မပေးပါဘူး။
လွတ်လပ် ပေါ့ပါးစွာ လိုက်ပါနိုင်စေရန် စီစဉ်ထားပါတယ်။
ဆင်ကြီး က သစ်လုံး ဆွဲနိုင်လို့ သစ်ဆွဲပါတယ်။
မြင်း က လှည်းဆွဲနိုင်လို့ လှည်းဆွဲပါတယ်။
ထို့ အတူ လူတွေလည်း ကိုယ့်ဝန် ကိုယ်အား ကိုယ် အသိဆုံးပါပဲ။
မနိုင်တဲ့ လူတွေ မထမ်းရလေအောင် နိုင်လောက်တဲ့ လူသာ နိုင်သလောက် ထမ်းစေဖို့ ဆူး က တိုက်တွန်းပြီး ပျော်ရွင်ဖွယ် ကောင်းတဲ့ ခရီးစဉ် တခု ဖြစ်အောင် စီစဉ်နေပါတယ်။
ကားခ အတွက် လုံးဝ စိတ်မပူကြပါနှင့် အားလုံးကို ထပ်လောင်းပြောချင်ပါတယ်။
အလှူအတွက် အချိုရည်နှင့် အအေး လာလှူတဲ့ လူလည်း ရှိပါတယ်။ နောက်ထပ် လည်း ဘာလှူရမလဲ မေးတဲ့ လူတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ သေချာတာကတော့ အလှူရှင်များ အနေနှင့် မိမိတို့၏ ချွေးနင်းစာများကို မိမိတတ်နိုင်သလောက် စေတနာ ရှိသလောက် လှူဒါန်းမှု အားလုံးကိုလည်း ကြိုဆိုပါတယ်။ မိမိတို့ လှူဒါန်းထားသော ငွေကြေးများသည်လည်း ဆေးရုံသို့ တန်ဖိုးတိကျစွာ ရောက်ရှိမည် ဖြစ်ပြီး တခြား ကုန်ကျစရိတ်များ လှူဒါန်းငွေ ရှိခဲ့သော် ပိုလျှံခဲ့လျှင် ပိုငွေ အဖြစ် ဆေးရုံကိုသာ ထပ်မံ လှူဒါန်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မရှိလို့ မလှူ…. မလှူလို့ မရှိ။ မဟုတ်တော့ပါဘူး..
မလုပ်လျှင် မဖြစ်.. လုပ်ရင်တော့ ဖြစ်ရပါမည်။
ပြိုင်တူ တွန်းရင် ရွေ့ပါတယ်။
တဖက်တည်းက ပြိုင်တူ တွန်းတာများခဲ့လျှင် ဆန့်ကျင်ဖက်မှ လာပြိုင်တွန်းသူ သည် လည်းလွယ်ကူစွာ ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်သည်။
ဆူး နှင့် မမ တို့၏ သီတဂူ သုမေဓာ ဆေးရုံ ဆေးဝါး ဒါန အလှူ အတွက် စိတ်အား ထက်သန်စွာဖြင့် အလှူကို ပါဝင်နိုင်ကြပါစေသောဝ်။
အလှူပါဝင်ချင်သူများကိုလည်း ဒီနေရာမှနေပြီး ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ အနည်းအများ ပမာဏသည် အဓိက မကျပါဘူး။ စေတနာသည်သာလျှင် အဓိက ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီထဲက .. အပြန်အလှန် ချပ်တင်းလုပ်ထားတဲ့စာတွေဟာ.. ပုဂ္ဂလိကဆန်လွန်းနေတာကြောင့်ဖျက်လိုက်ပါတယ်နော..
— သူကြီး —-
သစ္စာလင်းဆိုတာ ကြီးလားငယ်လားမသိပေမယ့်… အခုလိုလုပ်တာ တောက်ဆင့် ရှိလားမရှိလား ကိုယ့်ဟာကို ပြန်စဉ်းစားအုံးဗျ…..
တောက်တုံးမကျတဲ့ ဥနှောက်ကြီးနဲ. တောက်တုံးမကျ တဲ့ လုပ်ရပ်တွေလုပ်နေတာ…. အောထွီ
နရံမှာ နားတွေရှိရင် နင်အမျိုးအဆွေတွေဘာလုပ်နေလဲ ဆိုတာ သာ နားထောင် သူများအကြောင်းမသိချင်နဲ.
ရွာထဲမှာ လူကြီးသမ များ အား ကန်တော့ပါတယ်ဗျာ……
သစ္စာပဲလင်းလင်း ဘာပဲလင်းလင်းဗျာ သူများတွေပြောကြတဲ့စကားကို အခုလို တင်ပေးတာတော့ တော်တော်လွန်ပီပဲဗျာ…………….. ကိုရွှေတိုက်စိုးပြောတာထောက်ခံပါတယ်ဗျို့
သစ္စာလင်းဆိုတဲ့ တစ်ယောက်မှာ စဉ်းစားနိုင်တဲ့ အသိဥာဏ် တော်တော်လေးကို
ခေါင်းပါးတယ်ထင်တယ် ရွာထဲ ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်နဲ့ သူများပြောတာ ခိုးနားထောင်ပြီး ကိုယ်တိုင်တော့ ကိုယ်ထင်မပြရဲဘဲ နရံတွေမှာ နားတွေရှိတယ်ဆိုပြီး ရှင့်မှာတော့ အသိတရား မရှိတာ ထင်ရှားနေတယ် .
အခုလို အနီဝိုင်းပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ… နော်..
မန်ယူအသင်းကို ကြိုက်တယ်လေ.. အဲတော့ နီလေ ပိုပျော်လေပါပဲ..
တကယ်လို. အကောင့်တစ်ခုကို တစ်ခါပဲနီလို.ရရင် နောက်ထပ် အကောင့်တွေထပ်ဆောက်ပြီး နီပါအုံးလို. နော်..
သစ္စွာလင်းဆိုတာ ဘယ်သူလဲ။ စစချင်းရွာထဲကို ၀င်လာကတည်းက သူများ အကြောင်းတွေ နှိပ်ကွပ်ဖို့ ၀င်လာတယ်ထင်တယ်။ ရန်မစနဲ့နော်။ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်နေတာ။ သူများတွေဘာလုပ်နေတယ်။ဘယ်လိုအကြောင်းတွေ ပြောနေတယ်ဆိုတာ ဥာဏ်လေးနဲ့စဉ်းစားရင်း အလုပ်လုပ်ပါ။ လုပ်နိုင်ရင် ရှေ့ထွက်ပြီးလုပ်ပါ။ မလုပ်နိုင်လဲ နောက်ကွယ်ကနေ လက်သီးပုန်းမပြပါနဲ့။
ဟုတ်ပါဘူးဗျာ ကိုဖုန်းကျော်ကစိတ်ပူလို့ပြောတာနေမှာပါ သူလဲလှူချင်ပုံရပါတယ်
ကိုဖုန်းကျော် ခင်ဗျား ခင်ဗျာသဘောတူမယ်ဆိုရင် ခင်ဗျားနာမည်နဲ့ကျနော့ပိုက်ဆံ(မြန်မာငွေ၂သိန်း) လှူပေးချင်ပါရဲ့ ခင်ဗျားသဘောဘယ်လိုရှိသလဲဗျာ
သီတဂူဆရာတော် လာမဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ မှာ ကျနော်နဲ့ တွေ့ ပါမယ်။ သူ့ ရဲ့ သြစီခရီးစဉ်အနေနဲ့ ပါ။ ဆရာတော်ကို ဖူးရင်းနဲ့ ဒီကိစ္စပွားပါအုံးမယ်။
..ဆိုလိုတာက… အခုဆူးမမနဲ့.. ဒေါ်မမ တို့လုပ်နေတဲ့အလှူအတွက်.. တိုက်ရိုက်ရည်ရွယ်ပြောတယ် မဟုတ်ပါဘူး..
မြန်မာပြည်ကအလှူများဟာ.. တိုးတက်ချင်ရင်.. အောင်မြင်ချင်ရင်.. ထိရောက်ချင်ရင်.. ဘယ်လိုလုပ်သင့်တယ်..
စတာကို.. သူများနိုင်ငံတွေလုပ်ပုံနဲ့နှိုင်းပြရင်း. .ဆွေးနွေးပြတာသက်သက်ပါ…
အလှူအကြောင်း.. NGO တွေအကြောင်း.. တဆင့်ပြောသူတွေ..ပါဝင်သူ..လုပ်နေသူတွေ ရှိပါမယ်..။
လှူကြ..တန်းကြ..လုပ်ကြ..ကိုင်ကြရင်း.. အတွေ့အကြုံတခုချင်းဆီက.. လက်တွေ့အလုပ်သင်ခန်းစာနဲ့အတူတူ.. နိုင်ငံတကာလုပ်ပုံတွေကိုပါ. .နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ဖို့အခွင့်အရေးရတယ်..
အင်း သဂျီး မြန်မာလိုလေးတွေးပေးပါလား။
အမလေးလေး ဘာတွေဖြစ်နေကြတာလဲ သိတောင်မသိဖတ်တောင်မဖတ်လိုက်ရ၀ူး သူကြီးကဖျက်လိုက်ပြီတဲ့ သများနံမည်လည်းပါတယ်တဲ့ တူရတို့ကပြောတယ် ဒါပေမယ့်အ၀င်နောက်ကျလို့ တွေ့ရတော့ဝူး အကုသိုလ်မများဘူးတော့ဘူး နောက်ဆိုရွာဇရပ်ထဲဝင်ပြီးချစ်ချစ်တွေနဲ့အီစီကလီတောင် မလုပ်ရဲတော့ဝူး ….. အားလုံးအဆင်ပြေပြေစည်းစည်းလုံးလုံးလေး ပြီးသွားစေချင်ပါတယ် သူများအလှူကို ပိတ်ပင်ရင် ဖျက်ရင် ပြိတ္တာဖြစ်တတ်တယ် ….
လခစားဝန်ထမ်းဖြစ်သွားရင် ဂရုတစိုက်ငွေကောက်ပေးတော့ အလှူငွေပိုရမယ်ဆိုတာကိုပါ။
ဒါပေမယ့် ဒီကလူတွေက စရင်းဇယား အတိအကျလုပ်တတ်တဲ့ အကျင့်မှာအားနည်းတယ်။
ဒီတော့ ခိုးကြဖွက်ကြ တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေရှိခဲ့ကြပါတယ်။
ကိုခိုင်ပြောသလို တိတ်ိကျကျလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ကောင်းတာပေါ့။
ခပ်တာက ဒီမှာက အလှူခံတဲ့အထဲက %နဲ့ယူလိုက်တယ်ဆိုရင် မကောင်းမူ့ကျုးလွန်သလို
အပြောခံရတော့ အိတ်စိုက်ဘဲ လုပ်ကြပါတော့တယ်။
သူ့အရပ်နဲ့သူဇာတ်လို့ဘဲ သတ်မှတ်လိုက်ပါတော့ ကိုခိုင်ရေ။.
နောက်ဆုံး ကိုဘုန်းကျော် ကို ပစ်ရမဲ့ မျှား တွေ သူကြီး ဘက်ကို ရောက်တွားပြီ။
သူကြီးက ကိုဘုန်းကျော် ကို ကယ်ထုတ်တာပေါ့လေ။ ဟိ .. ဟိ ;-)
ကိုဖုန်းကျော်ရေ ရွာသူား တွေ စုပေါင်းပြီး အလှူလုပ်ဖြစ်အောင်
ဦးဆောင်ပေးတဲ့ မမ နဲ့ ဆူးကိုတောင် ကျွန်တော်တို့က ကျေဇူးတင်ပါသေးတယ်။
အခမဲ့ ဆိုတာ ကိုဖုန်းကျော် ဘာကို ရည်ရွယ်တာပါလဲ။
နောက်ပြီး “သီတဂူဆရာတော် တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ကျွန်တော်နဲ့တွေပါမယ်”
ဆိုတဲ့စကားလုံး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ နဲ့နဲ့ ရင့် မနေဘူးလား။
နောက်ပြီး သူကြီပြောတဲ့ “ငရဲနဲ့ခြောက် ဘုံနဲ့မြှောက်” ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို လုံးဝ
အဲတော့ ပြောချင်တဲ့သူ ပြောချင်တာပြောပေစေတော့။
ကျနော်တို့ကတော့ ကိုယ်လုပ်မယ်တာကို နောက်မဆုတ်ဘဲလုပ်မယ်ဗျာ။
သီတဂူဆရာတော်က လာမည့် တနင်္ဂနွေနေ့ မှာ သြစတျေးလျနိုင်ငံ Perth မြို့ သို့ ကြွပြီး၊ တရားတော်ချီးမြင့်ပါမည်။ နှစ်ပတ်ကြာပါမယ်။ ဆရာတော်လာတဲ့အခါမှာ ကျနော်တို့ နှိပ်ပေးရပါတယ်။ နှိပ်ပေးရင်း ကိုယ်သိချင်တာ မေးလို့ ရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်ကျနော်နဲ့ တွေ့ ပါအုံးမယ်လို့ ပြောတာပါ။ မမဆူးနှင့်သူကြီးပြောတာတွေကိုလက်ခံပါကြောင်း၊ အကြံကောင်းညာဏ်ကောင်း၊ စေတနာကောင်း၍ နတ်လူသာဓုခေါ်ကြပါလိမ့်မည်။ သီတဂူဆရာတော်ကြီးက မမဆူးကို အထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်းလက်မှတ် ထုတ်ပေးမယ်လို့ထင်တဲ့အကြောင်း။
မနေနိုင်တော့လို့နဲနဲမေးပရစေ။ “သီတဂူဆရာတော် လာမဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ မှာ ကျနော်နဲ့ တွေ့ ပါမယ်။ ဆရာတော်ကို ဖူးရင်းနဲ့ ဒီကိစ္စပွားပါအုံးမယ်။” ဆရာတော်ကိုဖူးမယ်ဆိုတာတော့ဟုတ်သွားပါပြီ။ ဘုန်းကြီးနဲ့ တွေ့ပြီးပွားမယ် ဆိုတော့ကာ တော့—ကပုန်းကျော်ရေ ဘယ်လိုမျိုးတွေးရင်ရမလဲ။